Sebenzisa imifanekiso yethu ukuba yinxalenye yeGoogle Street View | Iindaba zeGajethi
Uyenza njani eyethu iGoogle Street View
Ukujongwa kwesitalato sikaGoogle yenye yeenkonzo ezinomdla ezikhoyo kwiwebhu, ecelwa ngokubanzi ngabo bafuna ukuba nencinci isikhokelo kwindawo ethile naphina emhlabeni. Akunakuphela nje ukuba sikhokelwe yidilesi kunye nezitalato eziyinxalenye yayo, kodwa kwakhona, ukuba sineefoto ezithile kunye nemifanekiso ebonisa into yendawo ekuthethwa ngayo, oku kunokuba sisikhokelo esingcono kuthi ngexesha lokufumana Yatsho indawo.
Ngoku ekubeni sonke sineefowuni ezigqwesileyo (iipilisi kunye neekhamera zedijithali), mhlawumbi ngelinye ixesha siye sabamba imifanekiso embalwa yeendawo ezahlukeneyo ebesityelele kuzo. Ukuba le meko ivela ngoluhlobo, sinako ubeneNtando yeGoogle Street View kunye neefoto zethu, Into esiza kuyifundisa kweli nqaku ukusukela ukuba inkonzo ikhutshelwe nabani na ofuna ukuyisebenzisa nemifanekiso yabo.
1 Amanyathelo okuqala okuba ne-Google Street View yethu
2 Imifanekiso yethu ye-panoramic yokwenza iGoogle Street View eyeyakho
Amanyathelo okuqala okuba ne-Google Street View yethu
Nangona ulwazi luchazwe ngokugqibeleleyo kwindawo esemthethweni ye- Street View GoogleKukho umba obaluleke kakhulu ongakhathalelwanga apho, ofunyanwa ngokudityaniswa kweefoto kunye nemifanekiso esinokuthi siyisebenzise kule nkonzo. UGoogle uqikelela ukuba umsebenzisi sele enezithombe ezigcinwe kwiprofayile kaGoogle +, into enganyanzelekanga ukuba ibe njalo kwaye nangona kunjalo inokuba ngumda omncinci ukuba asazi ukudibanisa le mifanekiso. Into yokuqala ekufuneka siyithathele ingqalelo ukuyisebenzisa Street View Google ngemifanekiso yethu, kukuba kufuneka sibenayo kwi «ipanorama", eyiyo iphakamisa ukujikeleza okungama-360 °. Ukuba sele silungile eli nqaku, sinokuqhubeka ngolu hlobo lulandelayo:
Sivula indawo yethu yokukhangela iifayile ze-panoramic.
Yiya kwiprofayile yethu kuGoogle + kwisikhangeli sakho seintanethi.
Sibeka isikhombisi semouse kwi «yokuqalisa»Kwaye emva koko siya ku«Iifoto«.
Ukusuka kwiwindow entsha siya kwi «Ngenisa iifoto«
Sirhuqa imifanekiso ye-panoramic kwifayile yethu yokuhlola ukuya kumngenisi weefoto kuGoogle +
Ukuba sinqwenela, nqakraza kwiqhosha eliphezulu lasekhohlo elithi «Yongeza kwiAlbhamu»Ukwenza entsha kwiifoto zethu zepanoram.
Emva kwexesha sicofa kwiqhosha elisezantsi lasekhohlo elithi «Ilungile«.
Oko sele sikukhankanyile ngentla apha kuya kusinceda ukuba sibe neefoto zepanoramic ezibanjelwe kwicwecwe lethu kuGoogle +, into ekuza kufuneka siyisebenzise kamva xa sisiya yenza eyethu Street View Google ngale mifanekiso.
Imifanekiso yethu ebanzi yokudala ifayile ye- Street View Google Isiko
Elona candelo linomdla lenkqubo liza kweli candelo le-2, apho okokuqala kufuneka sicofe kwikhonkco eliya kuthi lisalathise Street View Google (ikhonkco ebekwe ezantsi kwinqaku), kufuneka ulandele amanyathelo ambalwa ngokulandelelana ukuze ukwazi ukudibanisa le mifanekiso sasiyibambe ngaphambili kwiprofayile kaGoogle +; Inkqubo yokwenza lo msebenzi iya kuba yinto efana nale ilandelayo:
Sinqakraza kwikhonkco Street View Google (ibekwe ekupheleni kwenqaku).
Ngoku ucofa kwifoto yethu yeprofayile ebekwe kwicala lasekunene lasekunene.
Ngoku xa singenile ngeprofayile yethu kuGoogle +, sicofa kwikhamera ebekwe ecaleni kwesithombe sethu.
Ifestile entsha iya kuvulwa kunye nazo zonke iialbhamu zethu zeefoto.
Sikhetha iifoto zepanoramic ebesikade singenise kuzo kuGoogle + kwaye siza kunxibelelana nazo Ukujonga kwesitalato sikaGoogle.
Kumfanekiso ngamnye «Ubicación»Zezabo
Uyakwazi ukubona uphawu olubomvu kwimifanekiso yakho nganye.
Ngoku cofa nje ku «Shicilela«.
Ngoku kufuneka ucofe ku «Qhagamshela Imifanekiso«.
Ngokuzenzekelayo uya kuba nethuba lokuncoma iifoto zakho ezihambelana nemephu, kunye nabanye abambalwa abayinxalenye yayo; Iifoto zakho ziya kuboniswa luphawu oluncinci oluhlaza okwesibhakabhaka, oluboniswe ngokulandelelana ngoonobumba. Ngaphakathi kwesi sigama unokuncoma amachaphaza amthubi, angumbono wepanoramic Street View Google.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Photosynth: esona sicelo sokuthatha iifoto ezingama-360
Iwebhu-Umbono weSitalato sikaGoogle
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uyenza njani eyethu iGoogle Street View
Ngaba sele uyazi ukuba uza kudlala njani uMhlobo ongabonakaliyo?
I-Quip ngoku iyafumaneka kwizixhobo eziselfowuni ze-Android